Mandritra ny fotoanan'ny famindrampo
"Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy". Apôk. 22:11.
Noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia tonga amin'ny olona ny zava-tsoa rehetra sitraky ny fony. Izy ilay Mpanome lehibe sady be dia be. Miseho amin'ny olona rehetra ny fitiavany amin'ny alalan'ireo fikarakarana safononoka natao ho an'ny olona. Efa nomeny antsika ny fotoam-pahasoavana izay hahazoana mamolavola ny toetra ho mendrika ny lapa ao ambony.
Inoantsíka tsy am-písalasalana fa ho avy tsy ho ela Kristy. Tsy anganongano no fahafantarantsika izany fa tena zava-misy marina tokoa (...) Rehefa ho avy Izy, dia tsy hanadío antsika ho afaka amin’ny ota na hanaisotra ireo kileman-toetrantsika tsy akory, na koa hanasitrana ireo fahalemen’ ny toe-panahintsíka. Tokony ho efa tanteraka míaloha ny fotoana hiverenany izany asa rehetra izan. Rehefa tonga ny Tempo, íreo izay masina día mbola híhamasína hatrany. Ireo izay nitahiry ny tenany sy ny fanahiny ho amin’ny fahamasinana sy ny fanamasinana ary ny vonìnahitra no handray ny fanamboarana farany ho amin’ ny tsy fahafatesana. Ireo izay tsy marina, tsy voamasina ary maloto kosa día mbola hitoetra ho toy izany íhany mandrakizay. Tsy misy asa azo atany ho azy ireo intsony hanesorana ny kilemany sy hanomezana azy ny toetram-pahamasinana.
Tsy hipetraka hanadio azy sy hanaisotra ny otany mbamin'ny fahalovany Ilay Mpanadio. Tokony ho efa notanterahina nandrítra ireo oran’ny fahasoavana izany rehetra izany. Aminizao fotoana izao indrindra no tokony hahatanterahan'izany asa izany ho antsíka.
Mandrítra ny fotoamvpahasoavana no anolorana ny fahasoavan’ Andríamanitra ho an'ny fanahy tsirairay. Reha toa anefa ka lanilanin'ny olona amin'ny fanomezampahafinaretana ny tenany izany tombontsoa izany, dea mampesaraka ny tenany amin’ny fiainana mandrakizay izy ireo. Tsy misy fahasoavana omena azy ireo intsony aorian’ny fotoam-pahasoavana. Amin’ny alalan’ny safidy ataony no ananganany hantsana tsy azo ihoarana eo aminy sy ny Andriamaniny.
Maro no mamita-tena amin'ny fiheverana fa ho voavova amin'ny fiavian'i Kristy ny toetrany kanefa tsy hisy ny asa fanavotana ny fo amin'izany fisehoany izany. Dieny etỳ no tsy maintsy hialantsika amin'ireo kileman'ny toetrantsika ka amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy no tsy maintsy handresentsika azy ireny raha mbola misy ny fotoam-pahasoavana. Izany no hahatonga ny olona ho mmendrika ny ho anisan'ny fianakavian'ny lanitra.